Ibali elichukumisayo le-Gay kwiZiko lelona bhanyabhanya iRaunchiest yalo nyaka - Itvnemovies
Ibali elichukumisayo le-Gay kwiZiko lelona bhanyabhanya iRaunchiest yalo nyaka
Imifanekiso yendalo yonke
UMiles Robbins njengoConnor, uGeraldine Viswanathan njengoKayla, uKathryn Newton njengoJulie, uGraham Phillips njengoAustin, uGideon Adlon njengoSam, noJimmy Bellinger njengoChad njengoChad. Izithinteli .
Ingqiqo esisiseko ye Izithinteli kuvakala ngathi yimali ehlekisayo yokwabelana ngesondo kunye nokujijwa kwabazali. Yeluswa nguwe Ukenza ngokugqibelele umbhali uKay Cannon, ifilimu ilandela abazali abathathu (uLeslie Mann, uJohn Cena, kunye no-Ike Barinholtz) njengoko benza uchungechunge lwee-jinks eziphezulu ukumisa abantwana babo abathathu (uKathryn Newton, uGeraldine Viswanathan, noGidiyon Adlon) ukuba bahambe ngesivumelwano. ukwabelana ngesondo okokuqala ngobusuku be-prom. Ifilimu ye iitreyila baye banika uluvo oluthile: Eli liqhula elibanzi, elithetha ngesini elijoliswe kwaba bathathu bakhulileyo njengoko besokola yinyaniso yokuba iintombi zabo zingabantu ngokwesini.
Lo ngumboniso bhanyabhanya onokuya kwelinye lamacala amabini-umdlalo wokuziphatha wokubuyisela umva uxhonywe kwiingqikelelo zobuntombi obunyulu kunye nobunyulu, okanye ukucamngca okucingisisiweyo malunga nokuba ngumzali kunye noxinzelelo loluntu olubeka kumantombazana. Ngethamsanqa kuthi sonke, Izithinteli ikhetha le yamva, kunye neraunch yemidlalo ehlekisayo yakudala ephoswe phakathi.
Ewe, le yifilimu apho uCena echuba ibhiya ngempundu yakhe. Kodwa Izithinteli ayixhalabelanga abazali kuphela. Lo mboniso bhanyabhanya ugxile kwiintombi zabo - abasetyhini abancinci abathathu abaneembono ezahlukeneyo kunye nezinto eziphambili, bonke bazibophelele ekugcineni i-arhente kubomi babo, izazisi kunye nesondo. Kwaye omnye wabo - uSam, oboniswe nguAdlon - uhamba kwinto enzima kakhulu. Ngelixa abahlobo bakhe ababini bejonge ukuba neentlobano zesini kuba, ke, baziva benjalo, uSam ungena kwisivumelwano esoyikela ukuba ubuhlobo bakhe nabahlobo bakhe abasenyongweni buza kuphela emva kwesikolo samabanga aphakamileyo ukuba akabelani nabo ngala mava makhulu. . Akanomdla wokulala ngesondo kunye nomhla wakhe, umfana onxibe i-fedora kodwa obonakala emhle ogama linguChad (uJimmy Bellinger). Enyanisweni, uSam uyi-gay. Xa siqala ukudibana naye akazange acinge ukuba angayivuma njani loo nto kuye, ayeke ukuba angamxelela njani nabani na ongomnye ebomini bakhe. Ukutyumza kwakhe umfundi obhinqileyo afunda naye akathethi, kwaye unika amandla akhe ekuzithatheni iifoto kunye noXena iGorha leNkosazana.
U-Ike Barinholtz njengo-Hunter, u-Adlon njengo-Sam, kunye no-Bellinger njengo-Chad kwi Izithinteli .
Utata wakhe, nangona kunjalo, sele esazi. U-Hunter, odlalwa nguBarinholtz, wayifumanisa ngethuku elomeleleyo labazali kwakudala ngaphambi kokuba intombi yakhe ixelele nabani na. Ngamandla okuqhuba emva kwendima yakhe kwisicwangciso somzali. Abanye abazali ababini badinwe ngumnqweno wokulondoloza imibono yabo enyulu kumantombazana abo amancinci nokulawula ubomi beentombi zabo. U-Hunter, kwelinye icala, unexhala lokuba ngokulala nendoda, uSam uya kuba namava angeyonyani. Ufuna ukumnqanda ekubeni abaleke loo nto ayiyo ngokwenene. Libali elishukumisayo elinqumla amanyala alingqongileyo. Isenokukushiya ulila kancinci.
Bonke ubungqina obudingayo bokuba ukumelwa kwe-queer kusanqongophele kwiifilimu ezinkulu zestudiyo zilele kwinto yokuba imuvi enje. Uthando, Simon iphume kulo nyaka kuphela. Loo filimu yakhululwa kwinyanga kuphela ngaphambili Izithinteli kwaye yayiyeyokuqala isitudiyo-eyenziwe umdlalo ohlekisayo wolutsha ogxile kumlinganiswa wesitabane. Ukuba ngumhlaba esisawuqhawulayo ngo-2018, ke ibali likaSam Izithinteli kuphawula isiganeko esinqabileyo ngokwentelekiso.
Uhlobo lulindeleke kakhulu ukuba luhlekise ubuqhetseba kunokubonisa umlinganiswa osembindini wamanye amabhinqa.
Ngokwembali, ama-comedies anomsindo kwi-vein ye Ibheyiwatch , Fumana nzima , Ibhabhalaza , Ii-CHIPs , kwaye abaninzi ngakumbi baye babuyela kwakhona kwaye kwakhona kwiziqhulo zokoyika izitabane. Nangona iinkcukacha zitshintsha, iziseko zihlala zifana: Abalinganiswa bayacatshukiswa yingcinga elula yokuba omnye umntu unokucinga ukuba bangamageza. Idlalwa ngokuhleka amaxesha ngamaxesha, isebenza njengesithiyelo kwi-anti-gay (kunye ne-anti-trans) imvakalelo emiliselwe kubaphulaphuli. I-Flirt yesini esifanayo, ukumanga, ibhedi ekwabelwana ngayo, ubukho bepipi kufuphi nencanca yomnye umlinganiswa - ezi ziphathwa njengezinto ezinokuthi ziphetshwe kuzo zonke iindleko. Uhlobo lulindeleke kakhulu ukuba luhlekise ubugezi kunokubonisa umlinganiswa osembindini wamanye amabhinqa, singasathethi ke ngalowo uhambo lwakhe lokuzamkela lunikezelwa ngokuthantamisayo.
URamona Young njengo-Angelica kunye no-Adlon njengoSam kwi Izithinteli .
Kwi Izithinteli , Utsalo lwangaphakathi lukaSam lungquzulwano olunyanzelisayo lwefilimu. Njengoko yena nabahlobo bakhe behamba kwi-prom kunye nothotho lwamatheko asemva, uziva uxinezeleko olukhoyo kwimeko yakhe. Ngaba ekugqibeleni uya kuthabatha inyathelo kumfundi wedrama ophuphayo amtyumzayo, odlalwa nguRamona Young (oshukumisa ikapa elihle kakhulu)? Ngaba umhla wakhe uya kuba nokuqonda? Ngaba ulwalamano lwakhe nabahlobo bakhe luya kutshintsha? Ibali likaSam lelinye lomfazi omncinci oseluphelweni lwento esityhilelo, echulumancisayo, neyoyikisayo. Utata wakhe uchitha uninzi lwefilimu ezama ukufumana indlela eya kuye, ezinikele ngokupheleleyo ekumncedeni kolu hambo.
Isilumkiso seSpoiler: Ekugqibeleni uSam uyawamkela umtsalane wakhe kubafazi. Unencoko emnandi noyise, omvumelayo ukuba aphumele kuye ngaphandle kokutyhila ukuba wayesazi lonke ixesha. Uxelela abahlobo bakhe; uyayifumana intombazana. I-Cannon iyenze yacaca-nokuba iphelile udliwano-ndlebe okanye iividiyo ezifakwe kwi-tweet yakhe kunye nentombi yakhe encinane ukudanisa - ukuba Izithinteli yi-ode ebuzali nasentombini ngokufanayo. Kwamanye amabali amabini aphambili efilim, oko kuthetha ukwamkela intombi yakho njengomntu ontsonkothileyo oza kulala ngesondo kwaye azenzele ezakhe izigqibo. Imalunga naba bazali bakhe isibindi kunye nembono yokuvumela abantwana babo babe yile nto bazakuba yiyo.
U-Hunter kufuneka naye ayeke ukuhamba, ngokuvumela uSam ukuba azibonele eyedwa indlela afuna ukuyiveza ngayo le nxalenye yakhe kubantu abamngqongileyo. Kodwa kukwakho enye into apho - oku kumgca wethemba elixhalabileyo lokuba unike abantwana bakho isibindi abasidingayo ukuze babe kanye kanye. Rhoqo, iresonance yeemvakalelo ilahleka kwirisqué studio comedies. Kuyahlaziya ukuba lo akazange azibaleke iimvakalelo okanye ubundlongondlongo, eqwalasela indlela ahlekisa ngayo amahlaya esini esahlukileyo ngaphambili. USam ufumana isiphelo sakhe esonwabileyo ekugqibeleni akwazi ukuzibona ngokwenyani. Nge Izithinteli , abaphulaphuli bafumana enye nabo.
Iipropathi ezingaselunxwemeni ezifikelelekayo ezithengiswayo
Imixholo yomthi wekrisimesi 2020
IHalloween yenze ngokwakho izimvo